यशैया २३ - पवित्र बाइबल [नेपाली बाइबल 1914]
२३:१ २३:२ २३:३ २३:४ २३:५ २३:६ २३:७ २३:८ २३:९ २३:१० २३:११ २३:१२ २३:१३ २३:१४ २३:१५ २३:१६ २३:१७ २३:१८
हे समुद्र नजिकका वासिन्दाहरू हो! तिमीहरू रोकिनु पर्छ र दुखी हुनु पर्छ। सोर “सीदोनका व्यापारी” थियो। त्यस शहरले व्यापारीहरू समुद्र पारि पठाउँथ्यो र ती मानिसहरू धनी भए।
ती यात्रीहरू समुद्री यात्रा गर्दै अन्नहरू खोज्दै बेच्थे। ती मानिसहरूले सोरबाट अन्नहरू ल्याऊँछन् जुन नील नदी छेउमा उब्जन्थ्यो र तिनीहरूले त्यसलाई अन्य राज्यहरूमा बेच्दै छन्।
सीदोन, तिमी अत्यन्त दुखीत हुनुपर्नेछ। किन? किनभने अब समुद्र अनि समुद्रका किल्ला यसो भन्दछ, ‘मेरा नानीहरू छैनन्। मसित प्रसव पीडाको अनुभव छैन। मैले नानीहरूलाई जन्म दिएको छैन। मैले जवान मानिसहरू र स्त्रीहरू पालेको छैन।’
मिश्रले सोरको बारेमा खबर सुन्ने छ। यो खबरले मिश्रलाई घात गर्दै दुखी पार्नेछ।
हे जहाजहरू! तर्शीशमा फर्क। हे मानवहरू, समुद्रको छेउमा बसेर तिमीहरूले विलाप गर्नुपर्नेछ।
अतीतमा तिमीहरूले सोरको शहरमा आनन्द गर्यौ। त्यो शहर शुरूदेखि नै बढिरहेकोछ। त्यस शहरका मानिसहरू व्यवस्थित हुनको लागि धेरै टाढा यात्रा गरेकाछन्।
सोर शहरले धैरे अगुवाहरू जन्मायो। त्यस शहरका व्यापारीहरू राजकुमारहरू जस्ता छन्। मानिसहरू जसले किन-बेच गरे उनीहरूलाई चारैतिर स्वागत र सम्मान भयो। यसकारण कसले सोरको विरूद्ध षडयन्त्र गर्यो?
उहाँ सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई महत्व नदिने निर्णय गर्नु भयो।
हे तर्शीशका जहाजहरू! आफ्नै देशमा फर्केर जाऊ। सानो नदी सम्झेर समुद्र पार गर, अब कसैले पनि तिमीहरूलाई रोक्ने छैन।
परमप्रभुले समुद्र तर्फ आफ्ना हातहरू फैलाउँनु भयो अनि परमप्रभुले सोरको विरूद्ध युद्ध गर्नलाई राज्यहरू भेला गर्नुभयो। परमप्रभुले कनानलाई सोरको सुरक्षाको ठाउँ ध्वंस पार्नलाई आज्ञा गर्नुभयो।
परमप्रभुले भुन्नुहुन्छ, “हे सीदोनकी कन्यकेटीहरू, तिमीहरू नष्ट हुनेछौ। तिमीहरू पटक्कै आनन्दित हुने छैनौ।” तर सोरका मानिसहरू भन्दछन्, “कित्तिमहरूले हामीलाई साथ दिनेछ!” तर तिमीले समुद्र पार गरेर कित्तिम पुग्यौ भने, तिमीहरूले त्यहाँ आराम गर्ने ठाउँ समेत पाउने छैनौ।
यसैले सोरका मानिसहरू भन्दछन्, “बाबेलका मानिसहरूले हामीलाई साथ दिनेछन्!” तर कल्दीहरूको देशलाई हेर! बाबेल अब देश रहेन। अश्शूरहरूले बाबेलमाथि आक्रमण गरेर युद्धका मचानहरू निमार्ण गरे। सिपाहीहरूले ती सुन्दर घरहरूबाट धेरै सम्पत्ति लगेर गए। अश्शूरले बाबेललाई जङ्गली जानवरहरू बस्ने ठाउँ बनायो। तिनीहरूले बाबेललाई एउटा खण्डहरूमा परिणत गरे।
यसैले, दुखी बन, तर्शीशबाट - आएका जहाजहरू तिमीहरूका सुरक्षाको ठाउँ अर्थात सोर ध्वंस हुनेछ।
मानिसहरूले सत्तरी वर्ष सम्म सोरलाई बिसर्नेछन्। (अर्थात एउटा राजाको राज्यकाल भरि बिसर्नेछन्।)। सत्तरी वर्ष पछि सोर वेश्यालयको गीत जस्तै हुनेछ।
हे पुरूषहरूले छोडेका नारीहरू! आफ्नो साराङ्गी लेऊ अनि शहरमा हिंड। आफ्नो गीतका धुन उचित ढंगले बजाऊ। आफ्नो गीत गाऊ। तब तिम्रा पुरूषहरूले सम्भवत तिमीहरूलाई सम्झना गर्नेछन्।
सत्तरी वर्षपछि, परमप्रभुले सोरको विषयमा पुर्नविचार गर्नुहुन्छ र उसको निर्णय दिनुहुनेछ। सोरको व्यापार फेरि कायम हुन्छ। सोर पृथ्वीको जम्मै देश वा जातिहरूका लागि एउटा वेश्यालय हुनेछ।
तर आफूले आर्जन गरेको पैसा सोरले राख्ने छैन्। सोरले व्यापारबाट संचय गरेको पैसा परमप्रभुको लागि राख्नेछ। सोरले त्यो पैसा परमप्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरूलाई दिनेछ। यसकारण अघाईजेल सम्म परमप्रभुका सेवकहरूले खानेछन, सुन्दर र राम्रा लुगाहरू लगाउनेछन्।